MyanCare | ကလေးဖျားနေချိန် ကာကွယ်ဆေး မထိုးရဘူးလား ??
ကလေးဖျားနေချိန် ကာကွယ်ဆေး မထိုးရဘူးလား ??
by myatlynn | Dec 17, 2020 | Common Health Problems
ကလေးက ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးဘူး။ ဖျားနေတယ်။ ဒါဆို ကာကွယ်ဆေးက ထိုးရမှာလား ? ခဏနောက်ဆုတ်ရမလား?
တော်ရုံ ကလေးကဖျားနေတာနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးတာကို နောက်ဆုတ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ နောက်ပြီး ဆရာဝန်ကလည်း ကလေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့် မထိုးသင့်ဆိုတာကို ကူညီပေးပါဦးမယ်။
ကလေးက ဖျားမယ်၊နှာစေးမယ်၊ အန်မယ်၊ ဝမ်းလျှောမယ် စတာတွေက ဖေဖေမေမေတို့ကို စိုးရိမ်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးဌာနာတို့ အမေရိကန်ကလေးဆရာဝန်များအဖွဲ့တို့က ကလေး သာမန် ဖျားနာရုံဆို ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ နောက်မဆုတ်သင့်ကြောင်းပြောထားပါတယ်။
ကလေးက ဖျားနေလို့ဆိုပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးတာ နောက်ဆုတ်တာ ကလေးအတွက် ဘာမှ အကျိုးမရှိပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေးကို အချိန်ကိုက်ထိုးမှ သာ ကြီးကြီးမားမားရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
ဒါကြောင့် ကလေးက ဖျားနေရင်လည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေး မထိုးခင် ကလေးကို အဖျားကျတဲ့ ဆေးတွေ တိုက်မလာတာ ကောင်း ပါတယ်။ တချို့ ဆေးတွေက ကာကွယ်ဆေးရဲ့ အာနိသင်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့ အခါကျရင် သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်က သောက်ဖို့ ဆေးတွေ ညွှန်းကြားပါလိမ့်မယ်။
ဘာလို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးတာဟာ အရေးကြီးတာလဲ?
ကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်ဆိုတာ မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးကို ပေးတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ လက်ဆောင်ပါ၊ နိုင်ငံက ပေးတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပါပဲ။ ကာကွယ်ဆေးကြောင့် နှစ်စဉ်ကလေးပေါင်း ၃ သန်း အသက်ဆုံးရှုံးမယ့် ဘေးကနေ လွတ်မြောက်ကြပါတယ်။
ကျောက်ရောဂါ၊ ဆုံဆို့နာတို့လို ရောဂါဆို ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ၉၉.၉% မဖြစ်ကြတော့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကာကွယ်ဆေး မထိုးဘူးဆို အဲ့ဒီရောဂါတွေ ပြန် ပြန့်ပွားလာပြီး ကလေးတွေ အသက်ဆုံးရဦးမှာပါ။
ကာကွယ်ဆေးတွေက စိတ်ချရသလား ???
ကာကွယ်ဆေးတိုင်းဟာ အဆင့်ဆင့် စမ်းသပ်ပြီး လူပေါ်မှာ အန္တရာယ်မရှိမှသာ ပေးတာပါ။
ကာကွယ်ဆေးတစ်ခု ဖော်မယ်ဆို နှစ်နဲ့ချီ သုတေသနလုပ်ပြီး အဆင့်ဆင့် စမ်းသပ်ပြီး စမ်းသပ်မှု အများကြီး ဖြတ်သန်းပြီးမှ လူတွေဆီကို ရောက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် ကလေးတွေမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးတာဟာ စိတ်ချရပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးတွေက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသလား ???
ဆေးတိုင်းကတော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကာကွယ်ဆေး တွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ က မပြင်းထန်ဘဲ ဘေးထွက်ဆိုကျိုး ကို ခံစားရရင်လည်း ခဏလေးနဲ့ ပျောက်ပါတယ်။
ဆေးထိုးလိုက်တဲ့နေရာမှာ နီပြီး နာယောင်လာတာ (၂-၃ ရက်ဆိုပျောက်ပါတယ်)
ကလေးက နေမကောင်းသလိုဖြစ်ပြီး ကိုယ်အပူချိန်နည်းနည်းတက် တာ (၁-၂ ရက်ဆို ပြန်ကောင်းပါတယ်)
ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာတော့ အင်မတန်မှ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ခဏလေးနဲ့ သိပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက ဒါမျိုး ဓာတ်မတည့်တဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ရင် ဘယ်လို ကုသရမလဲဆိုတာ သိပါတယ်။
ဓာတ်မတည့်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာရင် ကောင်းမွန်တဲ့ ကုသနည်းနဲ့ ခဏလေးအတွင်း ပြန်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။